Tara 12 andro : Nitokona fa mbola tsy nandray ny karamany ireo mpiasan’ny Tafita -
AccueilSongandinaTara 12 andro : Nitokona fa mbola tsy nandray ny karamany ireo mpiasan’ny Tafita
Tara 12 andro : Nitokona fa mbola tsy nandray ny karamany ireo mpiasan’ny Tafita
Nanakatona vavahady. Naneho ny tsy fankasitrahany amin’ny fahatarana 12 andro ny fandoavana ny karaman’izy ireo ny mpiasan’ny Tafita, ka nanakatona ny vavahadin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina omaly maraina. « Trésor, avoahy ny volanay » no sora-baventy nentin’izy ireo naneho ny fitakiany manoloana ny vavahadin’ny lapan’ny kolontsaina. « Tena ao anatin’ny fahasahiranana izahay satria maro ireo adidy sahanina amin’izao fotoana raha tsy hilaza afa-tsy ny fividianana ny fitaovan’ny mpianatra », araka ny fanehoan-kevitry ny mpiasa iray. Anisan’ny nisedra olana tamin’izao fitokonan’ny mpiasan’ny Tafita izao ireo mpikarakara hetsika izay nisy tamin’izy ireo no tokony hanao famerenana amin’ny hetsika ataon’izy ireo rahampitso.
Tonga teny an-toerana avy hatrany ny minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, Jean-Anicet Andriamosarisoa nifampiresaka tamin’ireo mpiasa. Niverina niasa izy ireo taorian’izay. « Ny fiovana nentin’ny teti-bolam-panjakana nasiam-panitsiana no niteraka fandaminana vaovao, ka nahatonga ny fahatarana », araka ny fanazavan’ny Tale Jeneralin’ny Tafita, Rakotoarimanga Eric Luciano. Efa misy ny fiaraha-midinika eo amin’ny Tafita sy ny minisitera amin’ny fandoavana ny karaman’ny mpiasa.